Dowlada Sweden oo 200 milyan ku bixinaysa waxbarashada ardada soo galootiga | Somaliska
Dowlada Sweden oo 200 milyan ku bixinaysa waxbarashada ardada soo galootiga
Dowlada cusub ee Sweden ayaa shalay soo bandhigtay qorshooda ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada ee iskuulada ay liidato natiijada imtixaamada. Dowlada ayaa sanadka soo socda keliya ku bixin doonta lacag gaaraysa 475 milyan oo karoon sidii loo caawin lahaa iskuulada aysan ardada helin natiijooyin fiican.
Lacagta inteeda badan ayaa lagu bixin doonaa iskuulada ku yaala xaafadaha soo galootiga ee ardada aysan helin dhibco ay ku galaan dugsiga sare. Lacagta qaar ayaa loo isticmaali doonaa in lagu kordhiyo mushaaraadka macalimiinta.
200 milyan oo ka mid ah lacagtaas ayaa lagu bixin doonaa taageerada ardada soo galootiga ah ee wadanka ku cusub, taasoo ka dhigan in ay heli doonaan taageero qaas ah iyo dad luuqadooda ku hala oo casharada ka caawiya. Wasiirka waxbarashada Gustav Fridolin oo ka hadlaya arintaan ayaa wargeyska DN u sheegay:
“Ardada soo gala iskuulada Sweden ee ka yimid dagaalada waxay qatar ugu jiraan in aysan bilow fiican helin. Waxaan ognahay in talaabooyinka nuucaan ah ay samayn karaan horumar weyn”.
Waaa fikir ficaan oo lagu farxo waan sodhawaynaynàa
Ascww,waa fursad wayn oo aan is dhihi karo waxay usoo hoyatay dadka soo galootiga qaasatan hadaanu nahay soomaalida kunool wadankaan maxaa yeelay hadaan aniga ahaan iska hadlo ciyaalkayga dgibwayn ayay kaqabeen qaabkii hore ee caawinaad la,aanta ahayd maxaayeelay ardayga da,diisa unbaa lagu geeyay galaaska uu fariisanaayo ee laguma geeynin aqoontiisa marka waa fursad fiican hadii loo qabto macalimiin saaid ah oo soo gaarsiiyo meesha ay higsanyaan caruurta aniga ahaana aad ayaan usoo dhaweeynayaa maxaa yeelay xisbiyadaan isku tagay waxii aan kudooranayba waa intaas iyo inakale oo dhiman, waad mahadsantahay walaalkeey Jimcaale sida hagar laaanta ah aad marwaliba uma soomaaliyeed ugu soo gudbiso mawduuca maalintaas aad isleedahay waxtar ayuu uleeyahay soomalida,
October 16, 2014 at 15:06
asc waan idin salaamay walaalayaa maxaa idiin hagaagay yaa wax loo ogolaaday yaa intrevu lyo dhiig loosoo tuuray maxaa idin helay idiima jeedo aniga wali dhiig la iima soo tuurin sanad iyo labo bil baa iidhamaatay dadkii iga dambeeyay waa loo sootuuray qaarna ilmihii waa uyimaadeen ilaah ayaa noo maqane bal qofkii wax kusoo kordheenow soo sheeg qeer alaha kusiiyee
Asc dhamaan dadka daganaanshaha loodiiday dawlada cusub maxay uhaysaa taas hanalo soo ogaado walaalayal qof kastana allah ha ufudu deeyo umuurihiisa amiin
ilaa hada wax war ah aniga maba hayo waxii war haye mesha hasoo gali yaan saan uga faidey sano thnks oll
Radiya orod oo dalkaada dhiso calaan wax aan aqoon baa tahay
ASC waan idin salaamay asaxaabta dhamaantiin maxaa kaqaldan ninka ALI isku sheegayo muxuu lacaytamayaan? yaase webkaan ugu talagalay in laysku caayo war xishoo nin raga dumarka macaayee kuumana jawaabaayi anigu wadanka aad aadileedahay yaakuudiiday adiga maad baxdid tankale wadankaaga dhiso wadankii sooidinka nagama soo qixin hadaad ina ragtihiin oo nama iinan badin in aan dawarsano shisheeyaha